Lizoqulwa ngoMeyi icala locansi likaMicho - Impempe
Lizoqulwa ngoMeyi icala locansi likaMicho
Umqeqeshi weZambia, uMicho Sredojevic
Selubekiwe usuku okuzoqala ngalo ukuqulwa kwecala elibi elibekwe owayengumqeqeshi we-Orlando Pirates, uMicho Sredojevic.
Lo mqeqeshi odabuka eSerbia kunezinsolo zokuthi wakhuluma amagama alumelayo waphinde wathinta owesifazane ngendlela angayithandanga eveza izifiso zakhe zokulala naye ngoDisemba nyakenye.
Wabe esevulelwa icala emaphoyiseni aseGqebherha (ebiyaziwa ngePort Elizabeth) eMpumalanga Kapa. Wadedelwa ngebheyili kaR10 000, kanti uphinde wabuyela enkantolo ngoLwesine la kube sekukhishwa khona usuku lokuqala kokuqulwa kwecala.
UMicho wayekuleli neqembu lesizwe laseZambina asengumqeqeshi walo ngesikhathi ehlukumeza lona wesifazane onemonyaka engu-39 eWolfsons Stadium.
“Umqeqeshi weqembu lesizwe laseZambia, uMilutin Sredojevic (51), uvele kafushane eNew Brighton Regional Court ngezinsolo zokuhlukumeza ngokocansi,” kusho isitatimende esikhishwe ngabophiko lwezokushushiswa kwamacala kuleli, iNational Prosecutions Authority.
“Icala lakhe lihlehliselwe kuMeyi 25 no-26 okuyilapho liyobe seliyoqulwa khona. Ibheyili yakhe kaR10 000 iqhutsheziwe.
“Kusolwa ukuthi ngoMsombuluko kaDisemba 7 ngesikhathi kunemidlalo yeCosafa ePort Elizabeth, owesifazane oneminyaka engu-39 wayehambisa ikhofi eWolfsons Stadium ngesikhathi ebuza uSredojevic ukuthi ngabe uyawudinga yini ushukela kwelakhe.
“Kusolwa ukuthi wabe esephendula ngokuthi cha wajobelela ngokuthi ufuna enye inhlobo kashukela esho ekhomba la kungakhona khona isitho sangasese salo wesifazane.
“Lo wesifazane wabe esebikela umphathi wakhe owahamba wayoxwayisa uSredojevic ukuthi angaphinde ayenze lento ayenzile.
“Kuthe esephinda lo wesifazane ehambisa ikhofi, kulokhu uSredojevic kusolwa ukuthi wabe esempansa ezinqeni” kuphetha isitatimende.
USredojevic wahamba kuleli isigubhukane ngo-2018 ngemuva kokwesula kwiPirates kunguLwesihlanu ebusuku inomdlalo obalulekile weMTN8 ngakusasa.
Kwadlula isikhashana kwavela izinsolo zokuthi wanukubeza ngokocansi owesifazane osebenza ehhotela okwakukhempe kulo iqembu.
Nokho lelo cala lagcina lingaqhubekanga njengoba engazange aliboshelwe uma esebuyile kuleli ekubeni kwakusolwe ukuthi ukuhamba kwakhe isigubhukane kwakungoba ebaleka.
Previous Previous post: Yisipiliyoni sikaKhune esizosiza iChiefs ekuhambeni
Next Next post: Usakulwela ukuyogijima kuma-Olympics uSemenya